အာရှမိုင်းနား၏ အနောက်မြောက်ကမ်းခြေအနီးတွင် အစ်လီ ယမ်မြို့ပျက်ကြီးကို ယနေ့တိုင် တွေ့မြင်နိုင်ပေသည်။ ယင်း အစ်လီယမ်မြို့ပျက်ကြီးကို ထရွိုင်းမြို့ဟု ခေါ်ခဲ့ကြသည်။ ယခုမူ ထိုမြို့ကြီးကို ထရုတ်ဟု ခေါ်သည်။ မကြာမီက မြို့ဟောင်းနေရာကို တူးဖော်ကြည့်ရှုသည့်အခ ...
ကိုရီယားဟင်းလျာထဲမှ အဓိကစားသုံးသော တစ်မျိုးဖြစ်သည့် ကင်ချီ သည် ရိုးရာအရံဟင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ဆားရည်စိမ်ထားသော အချဉ်ဖောက်ထားသည့် မုန်ညင်းထုပ်၊ ကိုရီးယားမုန်လာဥကဲ့သို့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ဂိုချုဂါရူ ၊ ကြက်သွန်မြိတ်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်းနှင့် ချော့ ...
ဆာတေး သည် ဟင်းခတ်အမွေးအကြိုင်တို့ဖြင့် နှယ်၍ တံစို့ထိုး ကင်ထားသော အစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ဆော့ဖြင့် တွဲဖက်၍ စားသုံးရပါသည်။ အရှေ့တောင်အာရှ အထူးသဖြင့် အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ စင်ကာပူနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့တွင် စားသုံးသော ဟင်းလျာတစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။ ...
ဆိုတို သည် ဟင်းရည်၊ အသားနှင့် အရွက်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အင်ဒိုနီးရှား ရိုရာ စွပ်ပြုတ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ များစွာသော ရိုးရား စွပ်ပြုတ်တို့ကို ဆိုတို ဟုခေါ်ပြီး နိုင်ငံရပ်ခြားနှင့် အနောက်တိုင်း လွှမ်းမိုးမှုရှိသော စွပ်ပြုတ်ကိုတော့ ဆော့ပ် ဟုခေါ်သည်။ ...
ဆူရှီ ဆိုသည်မှာ ဂျပန်စားစရာ တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ချက်ပြုတ်ပြီး ရှာလကာရည်ဖြင့် ရောနယ်ထားသော ထမင်းကို ငါးနှင့် အခြားပင်လယ်စာ အစရှိသည့် စားစရာ တို့နှင့် ရောစပ်ပြီး လိပ်ထားသော အရာဖြစ်သည်။ ပါးပါးလှီးထားသော ငါးကိုမူ ဆာရှိမိ ဟုခေါ်ပြီး ဆူရှီနှင့် မတူပဲ ကွဲပ ...
ပီဇာ ဆိုသည်မှာ အီတလီအစားအစာ တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ပီဇာရရှိရန် ဝိုင်းအောင်လုပ်ထားသည့် ဂျုံနှစ်ပွကို ခရမ်းချဉ်နှစ်၊ ဒိန်ခဲ နှင့် အခြားအဆာပလာများ ထည့်ကာ မီးပြင်းတွင်ဖုတ်၍ ပြုလုပ်ကြသည်။ ရိုးရာနည်းအတိုင်းပြုလုပ်လိုပါက ထင်းမီးသုံးထားသည့် မုန့်ဖုတ်ဖိုကို အသု ...
မက်ဂေါ်လီ သည် ကိုရီးယားတို့၏ ရိုးရာယမကာတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ အရောင်မှာ နို့ဖျော့ရောင် ဖြစ်သည်။ အနည်ထိုင်လျှင်မူ အဖြူဘက်သန်းသည်။ ပျစ်သယောင်ရှိပြီး အချိုစွက်သည့် ခါးသက်သက် စိမ်ရည်မှ ရှတတအရသာကို ခံစားနိုင်သည်။ အယ်ကိုဟောပမာဏ ရာခိုင်နှုန်းမှ ရာခိုင်နှုန်း ...
ဖက်ထုပ် သည် တရုတ်ပေါက်စီ တမျိုးဖြစ်ပြီး တရုတ်နှင့် အရှေ့အာရှနိုင်ငံများတွင် စားလေ့ရှိသည်။ တရုတ် နှစ်သစ်ကူးပွဲတွင် အဓိကစားစရာများအနက် တခုဖြစ်ပြီး မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်များတွင်မူ နေ့စဉ်စားနေသော အစားအစာ ဖြစ်သည်။ အခြား တရုတ်ဟင်းလျာများထက် အနောက်တိုင်းသ ...
အူဒွန် ဆိုသည်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံ၌ စားသုံးမှုများသော အစားအစာ တစ်မျိုးဖြစ်သည့် ဂျုံခေါက်ဆွဲတုတ် ဖြစ်သည်။ အူဒွန်ကို ကာကီအူဒွန်ကဲ့သို့ ကာကီဂျီရူ ဒရှိ၊ ပဲငံပြာရည်အကြည်၊ မီရင်းဆန်ဝိုင် တို့ဖြင့် ပြုလုပ်လေ့ရှိသည့် ဟုခေါ်သော အနံ့မွှေးမွှေး သားငါးပြုတ်ရည် ကျ ...
ဘက်ကွတ်တေး ဆိုသည်မှာ ဝက်နံရိုးအား ဟင်းရည်တွင်း ချက်ပြုတ်ထားသော ဟင်းလျာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး မလေးရှားနိုင်ငံ နှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံတို့ရှိ ဟော့ကလို နှင့် တီယိုချူး လူမျိုးတို့ နေထိုင်ရာ အရပ်တွင် လူကြိုက်များရေပန်းစားပြီး အနီးအနား ဒေသများဖြစ်သော ရီအောကျွန ...
နာဆီလီမက် သည် မလေးရှား ဟင်းလျာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အနံ့ပါသော ထမင်းဖြစ်အောင် အုန်းနို့ နှင့် ပန်ဒန်း အရွက်တို့ဖြင့် ချက်ပြုတ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ မလေးရှားတွင် နေရာအနှံ့တွေ့ရပြီး နိုင်ငံတော် အစားအစာဟု ဆိုကြသည်။ ထို့ပြင် မလေးလူမျိုးများ ရှိကြသော အိမ်နီးချင ...
မီးဆယမ် ဆိုသည်မှာ ထိုင်းခေါက်ဆွဲဟု မလေးဘာသာဖြင့် အဓိပ္ပာယ်ရပြီး ကြာဇံအမျှင်သေးသေးကလေးများဖြင့် ချက်ပြုတ်ထားသော ဟင်းလျာ ဖြစ်သည်။ ပင်လယ်ပိုင်း အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများမှ အစပြုပြီး စင်ကာပူနိုင်ငံ နှင့် မလေးရှားနိုင်ငံတို့တွင် လူကြိုက်များသည်။ မလေး ...
အီရန်နိုင်ငံ တွင် များစွာသော အားကစားအမျိုးအစားများကို လေ့ကျင့်လျက်ရှိနေကြသည်။ ထိုအားကစားအမျိုးအစားများထဲတွင် ခေတ်သစ်အားကစားနှင့် ရိုးရာ နှစ်မျိုးလုံးပါဝင်သည်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် အီရန်နိုင်ငံ တီဟီရန်မြို့တော်၌ အာရှအားကစားပွဲတော်ကို အိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြ ...
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရှိ တူးဆလန်ပြတိုက်သည် ခမာနီတို့အုပ်စိုးစဉ်က ပြုခဲ့သမျှသော ရက်စက်မှုများအနက် လူမဆန်ဆုံးသော နှိပ်စက်မှုများအား လူအများတို့အမှတ်ရဖွယ် ပြန်လည်တင်ပြထားသည့် ပြတိုက်ဖြစ်သည်။ မူလက အထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းအဖြစ် ပြင်သစ်ထံမှ လွတ်လပ်ရေးရပ ...
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတော်အလံ သည် လက်ရှိပုံစံကို ၁၉၄၈ တွင် စတင်အသုံးပြုခဲ့ပြီး ၁၉၉၃ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနှင့် ဘုရင်စနစ် ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခြင်းများပြီးနောက် ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ကိုရီးယားဒဏ္ဍာရီ သည် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ဒေသတွင် နှစ်ပေါင်းထောင်ချီကြာမြင့်စွာ နှုတ်မှုရေးရာ လက်ဆင့်ကမ်းသယ်ဆောင်လာခဲ့ကြသော ဇာတ်လမ်းပုံပြင်များဖြစ်သည်။ ဤဇာတ်လမ်းပုံပြင်များကို ကမ္ဘာလောကဖန်တီးခြင်းဆိုင်ရာ ဒဏ္ဍာရီအကြောင်းအရာများနှင့် ဩကာသလောက၊ လူမှုလ ...
ဂဲတများကို အဓိကအားဖြင့် ယုခတနှင့် တွဲဖက်ကာ ဝတ်ဆင်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အနောက်တိုင်းဝတ်စုံများနှင့်လည်း နွေရာသီကာလများတွင် ဝတ်ဆင်လေ့ရှိသည်။ ဂဲတကို ဂျပန်ရိုးရာဝတ်စုံများ၊ ပုံမှန်မဟုတ်သည် ဂျပန်ရိုးရာဝတ်စုံများ၊ အနောက်တိုင်းဝတ်စုံများနှင့် တွ ...
ဂျိခ-တဘိ သည် အပြင်ထွက်သည့်အခါများတွင် ဝတ်ဆင်ကြသည့် ဖိနပ်တစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်းကို ၂၀ ရာစု အစောပိုင်းမှ စတင်တီထွင်ကာ အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ တီထွင်ဆက်သစ်မှုများ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်လာသည့်အခါ လက်တွေ့ကျလာပြီး ဂျိခ-တဘိသည် လူ၏ ခြေ ...
ဇိုးရိ သည် သားရေကြိုးတပ်ထားသည့် အပြားပုံစံရှိသည့် ဂျပန်ကြိုးသိုင်းဖိနပ်တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ဇိုးရိကို ကောက်ရိုးများ၊ အဝတ်အစားများ၊ သစ်စေးသုတ်ထားသည့် သစ်သားများ၊ သားရေ၊ ရာဘာ နှင့် အခြားသော လူတို့ဖန်တီးထားသည့် ပစ္စည်းများဖြင့်လည်း ပြုလုပ်ကြသည်။ ဇိုးရိ ...
တဘိကို အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ ဇိုးရိကဲ့သို့သော ဖိနပ်များနှင့် ဝတ်ဆင်ကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဂဲတနှင့် ဝတ်ဆင်လေ့ရှိသည်။ တဘိကို ကီမိုနိုကဲ့သို့သော အဝတ်အစားများနှင့် တွဲဖက်ကာ ဝတ်ဆင်ကြသည်။ တဘိသည် ခြေချောင်းနှစ်ခုကြားတွင် ခွဲခြားထားသဖြင့် သားရေဖိနပ်မျ ...
ဝရဂျိ သည် ကောက်ရိုးမျှင်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ကြိုးသိုင်းဖိနပ် ဖြစ်သည်။ ဟိုးယခင်က ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ဂျပန်လူမျိုးများ အဓိက စီးကြသည့် ဖိနပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အုဝဘခိ သည် ဂျပန်ဖိနပ်တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို အိမ်တွင်း၊ ကျောင်းအတွင်း၊ သတ်မှတ်ထားသည့် ကုမ္ပဏီများနှင့် အများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သည့် နေရာများ စသည်တို့ကဲ့သို့သော အပြင်လမ်းလျှောက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဖိနပ်များဖြင့် စီးနင်း၍ မဖြစ်နိုင်သော/ ကန့်သတ်ထားသေ ...
Kanojo, Okarishimasu ဂျပန်မန်ဂါကာတွန်း သည် ရဲယ်အိဂျိ မိယဂျိမ စာရေးသူ နှင့် ပုံရိပ် ဒီကာတွန် Weekly Shōnen Magazine Kodansha ဇူလိုင်လ 2017 ကတည်းကတွင်ထုတ်ဝေသည်
ဆာမူရိုင်း ဆိုသည်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံ တွင် စက်မှုထွန်းကားသောခေတ်မတိုင်မီက စစ်တပ်အတွင်း မြင့်မားသောဂုဏ်ရည်ရှိသည့် ရာထူးအဆင့်အတန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာသာပြန်ဆရာ ဝီလီယမ် စကော့ ဝီလ်ဆင်၏ အဆိုအရ "တရုတ်ဘာသာတွင် 侍 စာလုံးသည် မူလအဓိပ္ပာယ်အားဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင ...
ဂျာမန်လူမျိုး ကဗျာနှင့် ဂီတဆရာ ဗားဂနားသည် တေးသံစုံဇာတ်ထုပ် လေးထုပ်ကိုရေး၍၊ ၁၈၇၆ ခုနှစ်တွင် လေးညဆက်ကာ ကပြစေခဲ့သည်။ ယင်းတေးသံစုံဇာတ်ထုပ် များအနက် ဇာတ်ထုပ်နှစ်ထုပ်တွင် ဆိဖရိသည် အဓိက ဇာတ်ဆောင်သူတစ်ဦး ဖြစ်ပေသည်။ ဆိဖရိ၏ ဇာတ်လမ်းအတိုချုပ်မှာ ဤသို့ဖြစ်၏။ ...
ခရစ်စမတ်သီချင်းတစ်ပုဒ် သည် ချားလ် ဒစ်ကင်း ရေးသားသော လုံးချင်းဝတ္ထုတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်၍ နာမည်အပြည့်အစုံမှာ A Christmas Carol. In Prose. BeingaGhost Story of Christmas ဖြစ်သည်။ ဂျွန်လိချ်က သရုပ်ဖော်ရေးဆွဲပေး၍ ၁၈၄၃ တွင် ချပ်မန်းနှင့် ဟောလ် စာပေထုတ်ဝေရ ...
Glass Palace Chronicle of the kings of Burma သည် ကုန်းဘောင်ခေတ်၏ စံပြုရာဇဝင်ကျမ်း ဖြစ်သော မှန်နန်း ရာဇဝင် ၏ တစ်ခုတည်းသော အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန် ရာဇဝင်ကျမ်း ဖြစ်သည်။ ၁၉၂၃ ခုနှစ်တွင် မှန်နန်းရာဇဝင် ကို ဦးဖေမောင်တင် နှင့် ဂေါ်ဒင် လုစ် တို့က အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ...
က ခ ပြဿနာ
စာရေးဆရာအသင်းကို ၁၃၀၁ တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အသင်းစည်းမျဉ်းတွင် အသင်းသားများကို အသင်းသား အသင်း သားဟု ခွဲခြားထားရန်ပါရှိသည်။ စာရေးခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသူ သို့မဟုတ် ဤသို့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမပြုသော်လည်း စာအုပ်စာတမ်းတစ်ခုခု ထုတ်ဝေရေးသားသူကို ...
ကလျာဏီကျောက်စာမှာ ကောဇာသက္ကရာဇ် ၈၄၁ ခုနှစ်တွင် ဟံသာဝတီဘုရင် ဓမ္မစေတီမင်းကြီး ထိုးစိုက်ခဲ့သော ကျောက်စာဖြစ်၍ ယခုအခါ ပဲခူးမြို့ အနောက်မျက်နှာ မဇင်းချောင်းရပ်ကွက် ရွှေသာလျောင်းဘုရားလမ်း ကလျာဏီသိမ်တော်ကြီး၏ တောင်ဘက်အနီးတွင် တည်ရှိသည်။ ဓမ္မစေတီမင်းသည် ...
ခေတ်စမ်းစာပေ သည် ၁၉၃၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအချို့၏ အရေးအသားပုံသဏ္ဌာန် အသစ်တစ်ခုမှ ထိုဝေါဟာရထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၃၄ ခုနှစ်တွင် စုစည်းထုတ်ဝေခဲ့သော ခေတ်စမ်းပုံပြင်များစာအုပ်ပါ အရေးအသားပုံစံများကို ခေတ်စမ ...
ချဉ်ပေါင်ရွက်သည် မောင်မှိုင်း ဝတ္ထုသည် မြန်မာကာလပေါ် ဝတ္ထုများအနက် ဒုတိယ ထွက်ပေါ်လာသော ဝတ္ထုဖြစ်သည်။ ပထမဆုံး မြန်မာကာလပေါ် ဝတ္ထုဖြစ်သည့် မောင်ရင်မောင် မမယ်မ ဝတ္ထုနှင့် တစ်နှစ်တည်းမှာပင် လအနည်းငယ်ခြားပြီးနောက် ထွက်ပေါ်လာသည်။ ဤဝတ္ထုကို ရေးသားသူမှာ ...
၁။" မြွက်ဆိုမုသား”၊ နှုတ်သံပျားသို့၊ စီးပွားလိုယောင်၊ ရူပဆောင်လျက်၊ မှားအောင်ပြစ်ရှာ၊ ကြံတတ်စွာသား၊ မေတ္တာချည်းနှီး၊ လူခွေးမြီးနှင့်၊ တသီးတခြား၊ တပါးပြည်ရွာ၊ မရှောင်သာ၍၊ မကွာပေါင်းဖော်၊ ပြုငြားသော်လည်း၊ အပေါ်ကားယှဉ်၊ အထဲကြည်၍၊ စိတ်ယဉ်နှိမ့်ချ၊ အာ ...
၁ အပ္ပမာဏော် ၊ အဟော်ဗုဒ္ဓိ၊ တုမယှိသား၊ ဣတိပိသော၊ နယ်ကျက်ပြောလျက်၊ သျှင်စေလူ့ထွတ်၊ ဂုဏ်တော်မြတ်နှင့်၊ မချွတ်မပြား၊ ဤတရားကို၊ မျိုးခြားလေးတန်၊ သူတော်မွန်တို့၊ မဋ္ဌာန်ကရိုဏ်း၊ ဆိုသောတိုင်းလျှင်၊ အားလှိုင်းလုံ့လ၊ ဓာရဏဖြင့်၊ မုခတန်ဆာ၊ ရတနာဟု၊ ဣရိယာပို ...
စကားပုံ ဆုံးမစာ (ပေါက္ကံမောင်ချို)
စကားပုံဆုံးမစာ” ကို ပေါက္ကံမောင်ချို က ရေးသားခဲ့သည်။ ပညာကိုရှာခြင်း၌ တောမုဆိုးသည် သားရှိရာအရပ်ဝယ် ပျပ်ဝပ်ကျိုးနွံဘိသကဲ့သို့။ ဝီရိယရှိခြင်း၌ တောမျောက်သည် မြေပျောက်မည်အထင်နှင့် မြေပြင်ကိုတစ်ညဥ့်သုံးခါ အိပ်ရာမှထ၍ စမ်းဘိသကဲ့သို့။ အသုံးကြီးသော် မပြီးစ ...
စကားပုံ ဆုံးမစာ (သူတော်ဦးနု)
စကားပုံ ဆုံးမစာ ကို သူတော်ဦးနု က ရေးသားခဲ့သည်။ ၁။ ဗုဒ္ဓဆာယာကိုတွယ်ရမည်၊ ယုတ်လှတာကို ပယ်ရမည်။ ဗုဒ္ဓဆာယာကိုတွယ်မှ အေးမြရာသည်။ ယုတ်လှတာကိုပယ်မှ ဘေးပကွာသည်။ ၂။ သေရည်ကို မသောက်နှင့်၊ ရေကြည်ကို မနှောက်နှင့်။ သေရည်ကို သောက်ပါက အပါယ်ဘုံသို့ ကျတတ်သည်၊ ရေက ...
စကားပုံမေတ္တာစာ” ကို ကျည်းကန်သျှင်ကြီး သျှင်နန္ဒဇေ က ရေးသားခဲ့ပါသည်။ ၁။ ချစ်သည်၊ ခင်သည်၊ ကြင်သည်၊ ကျွမ်းသည်မှန်စေ၊ ရန်သူတွေ့က စွန့်စားခဲသည်။ သားချင်းပေါက်ဖော်တော် နီးစပ်သည်မှန်စေ၊ ပေးကမ်းခဲသည်။ မြဲစွဲခယမ်း၍ ထမ်းရွက်သည်မှန်စေ၊ အရှင့်အကျိုးကို ဆောင ...
မူလက မြန်မာနိုင်ငံ ဘာသာပြန် စာပေအသင်း ဟူသော အမည်ဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး နောင်တွင် စာပေဗိမာန် ဟူသော အမည်ဖြင့်သာ ထင်ရှားသည့် စာပေလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ ဌာနဖြစ်လာခဲ့သည်။ စာပေဗိမာန်ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဟု အဓိပ္ပါယ်ပြန်ဆိုသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဘာသာပြန် စာပ ...
သုဏေယျ = နာကြားရာ၏။ စိန္တေယျ = ကြံစည်ရာ၏။ ပုစ္ဆေယျ = မေးမြန်းရာ၏။ ဘာသေယျ = ပြောဆိုရာ၏။ ဝိစာရေယျ = စူးစမ်းဆင်ခြင်ရာ၏။ လိခေယျ = ရေးမှတ်ရာ၏။ သိက္ခေယျ = လေ့ကျင့်ရာ၏။ ဓာရေယျ = နှုတ်ငုံဆောင်ရာ၏။ သုစိပုဘာ၊ ဝိလိသိဓာ”၊ အက္ခရာစွဲသုံး၊ ဤရှစ်လုံးကို၊ သီကုံးပ ...
စာ​ပေဗိမာန် စာ​ပေနှီး​နှောဖလှယ်ပွဲနှင့်​ စာတမ်း​ဖတ်ပွဲများ​
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် စာပေဗိမာန် အဖွဲ့ ဥပဒေတွင် စာပေတိုးတက်ပြန့်ပွားစေရန် အလို့ငှာ စာပေကို လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားလာအောင် လှုံ့ဆော်ခြင်း၊ စာပေနှီးနှောဖလှယ်ပွဲများ၊ စာပေသဘင်များ၊ စာပေညီလာခံများနှင့် စာပေပြပွဲကြီးများ ကြီးမှူးကျင်းပခြင်း ဟူ၍ ပြဋ ...
ဟောင်းရွက်ညှာခါလှစ်လို့၊ တာသစ်ကယ်တဲ့ နံ့ကြိုင်၊ သုတ်ဖြူးလေဆော်က၊ ပန်းကံ့ကော် ဝတ်မှုံကျင်း၊ သင်းပျံ့လို့ လှိုင်၊ ကြယ်နှစ်ပြိုင်၊ စိတြငယ်နှင့်၊ ငွေလသော်တာတို့၊ ယုဂန်ချာ တောင်တော်စွန်းမှာ၊ ထွန်းထိန်လို့လင်း။
၁။ တိလောကဟု၊ မရနှိုင်းတူ၊ ဘက်မပြူသည့်၊ သုံးဆူရတနာ၊ မာတာပိတ၊ ဆရာစသား၊ အရှင်များကို၊ ပြစ်မှားမဆို၊ ရိုသေကြစေ၊ သာမဏေက၊ သူငယ်စသား၊ တပည့်များတို့၊ မှတ်သားကြပ်ကြပ်၊ မပြတ်သို့ပင်၊ ဆုံးမသင်သည်၊ ဝမ်းတွင်းအမြဲသွတ်။ ၂။ ဂယောက်ဂယက်၊ ကျက်ကျက်ပျောက်ပျောက်၊ စားသ ...
ဒုတိယ မဟာရာဇဝင်တော်ကြီး သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ကုန်းဘောင်ခေတ်တွင် ထွက်ပေါ်ခဲ့သော ဒုတိယမြောက် မြန်မာရာဇဝင်ကျမ်း ဖြစ်သည်။ မှန်နန်း ရာဇဝင် ၏ ဒုတိယအပိုင်းဖြစ်ပြီး ဗြိတိသျှတို့နှင့် ဖြစ်ပွားခဲ့သော စစ်ပွဲနှစ်ခု အပါအဝင် ၁၈၂၁ ခုနှစ်မှ ၁၈၅၄ ခုနှစ်အထိ ဖြစ်ရပ်မ ...
ကျင့်မူရာခပ်ပျင်းနှင့်၊ သွတ်ဖျင်းလူယုတ်တေ။ ။ တတ်ပညာပဇာတတ်ပါအံ့၊ များမှတ်ကြလေ။ ။ အတတ်ကိုမရှာဖွေလျှင်၊ ဥစ္စာတွေရရေး။ ။ ဘယ်နှယ်ကြံဖန်မြောက်ပမယ်၊ မိုးလောက်ကွာသေး။ သိပညာဖြစ်ပွားအောင်၊ ချစ်သားတို့သင်ကြပါ။ ။ မိဘဆရာတို့၊ ဖန်ခါခါ တပည့်သားကို၊ ထောင်နားဆန် ...
ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရသည် ကိုရင်ဘဝတွင် ချစ်သူရည်းစား ရှိ၏။ ပညာပြည့်စုံပါက အိမ်ရာထူထောင်ရန် ရည်ရွယ်ထား၏။ သို့ပါသော်လည်း ဆရာဖြစ်သူက လောကီတွင်နေခြင်းထက် လောကုတ္တရာတွင် နေခြင်းသည် ပို၍မြတ်ကြောင်း၊ စာတော်သူတစ်ဦးဖြစ်သည့်အတွက် လောကုတ္တရာတွင် နေထိုင်ပါက ပို၍ အကျ ...
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၈၀၀-ပြည့်နှစ် အင်းဝခေတ် မိုးညှင်းမင်းတရားလက်ထက်ရောက်လျှင် တောင်တွင်းကြီးမြို့မှ တဘောင်တစ်ခု ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါတဘောင်မှာ "ဘုရားရှစ်သောင်း၊ လေးထောင်ဆောင်း၍၊ ကိန်းအောင်းစံရန်၊ ဓမ္မခန်သည်၊ သံတောင်ဖြိုးမြင့်၊ စွင့်လိမ့်လေ။ အကိုက်လ ...
ပါရာယနဝတ္ထု နှင့် ရာဇဝင်ကျော် တို့သည် ပေလေးပင် ရှင်လေးပါးအနက် တစ်ပါးအပါအဝင်ဖြစ်သော ရှင်မဟာသီလဝံသ ပြုစုရေးသားတော်မူခဲ့သည့် စကားပြေဝတ္ထုများဖြစ်ကြလေသည်။ ပါရာယနဝတ္ထုကို အင်းဝဘုရင် ဒုတိယမင်းခေါင် နတ်ရွာစံပြီးနောက် သားတော်ရွှေနန်းကြော့ရှင် ဘုရင် နရပတိ ...
၁။ ကြီးပွားတိုးတက်ရန်အားသည် ဝီရိယ နှင့် ချွေတာခြင်း ဖြစ်သည်။ ၂။ လက်သမားကောင်း၏ အရင်းအနှီးမှာ စူး၊ ဆောက်ကောင်းများ ဖြစ်ဘိသကဲ့သို့ စာအုပ်များမှာ တိုးတက်ကြီးပွားသူတို့၏ အရင်းအနှီးလက်နက်ကောင်းများ ဖြစ်ပေသည်။ ၃။ ဝီရိယကိုထုတ်၍ လုပ်ရသမျှလေးစု မကြာမီ အထု ...
၁။ "ပန်း၏ပမာ"၊ ဤလင်္ကာတွင်၊ မာတာပိတ၊ ဆိုဆုံးမသား၊ ထိုစကားကို၊ မှတ်သားကုန်ကြ၊ မိန့်လိုက်ပြအံ့၊ မွေးဘလက်ရုံး၊ မြပန်းကုံးသို့၊ နှစ်လုံးဝမ်းက၊ ချစ်နိုးလှသည်၊ သားလှရွှေတောင်၊ ဘသည်းခေါင်၊ နားထောင်၍သာ၊ စေ့စေ့နာလော့၊ မိရာဘရည်၊ တည်မည်အကြောင်း၊ ကောင်းသားကျ ...
ပူ ရာဏ်ဓမ္မဂန်ဖတ်စာကို ကျီးသဲလေးထပ်ဆရာတော် ရှင်မုနိန္ဒာဘိဇေ က ရေးသားခဲ့သည်။ ၁။ သားလည်းမသီး၊ သမီးမရ၊ အိုရွယ်ကျသော်၊ ဒုက္ခချင့်မှာ၊ မဖုံးလား။ ၂။ သန်လျက်ဖြစ်ငြား၊ မသွေးထားသော်၊ ချင့်ဓားလိုခါ၊ မတုံးလား။ ၃။ ဓမ္မသတ်တရား၊ မသင်ငြားသော်၊ စကားဆိုခါ၊ မရှုံး ...
ပျို့ သည် ပိုဒ်ရေများစွာပါဝင်သော လေးလုံးစပ် ကဗျာရှည်အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ အင်းဝခေတ်တွင် စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး အင်းဝ၊ တောင်ငူ၊ ညောင်ရမ်းနှင့် ကုန်းဘောင်ခေတ်တို့တွင် ထွန်းကားခဲ့သည်။ စတင်ရေးသားခဲ့သူမှာ အသက် ၁၆ အရွယ်ရှိ ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း- မင်းတုန်းမင်းကြီ ..
2gether: The Series (ထိုင်း ရုပ်သံ ဇာ ..